LMD: Tsy zatra mikaroka ny tanora Malagasy
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire mar 23, 2018
Zatra fampianarana feno ny mpianatra Malagasy mandranto fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony. Mananosarotra azy ny fiovan’ny rafi-pampianarana Licence- Master- Doctorat (LMD). Mitaky fianarana manokana sy fikarohana ity rafi-pampianarana ity.
Interview : William RATREMA
Ny 10 % ny fahalalana ihany no omen’ny mampianatra. Fenoin’ny mpianatra amin’ny alalan’ny fikarohana kosa ny 90 %. Noho izany, “mila mahay mampiana-tena ny mpianatra iray”, hoy ny tale mpanorina ny vondrom-panabeazana ACEEM, William RATREMA. Etsy ankilany, mitaky foto-drafitr’asa manara-penitra sy fitaovana toy ny trano famakiam-boky, fitaovana nomerika ny LMD. Ho an’ny ACEEM manokana, miezaka manaraka izany fenitra izany ny oniversite.
Azon’ny mpianatra atao ny mandamina ny fianarany mifanaraka amin’izay tian’ny atao. Afaka maka “unité d’enseignement” hafa ankoatra ny lalam-piofanana rantoviny ny mpianatra iray amin’ity rafi-pampianarana ity. Raha mianatra ho dokotera izy ohatra, afaka mianatra amin’ny lalam-piofanana hafa mifanindran-dalana amin’izany toy ny “gestion”. Ho mora ho azy ny hanokatra toeram-pitsaboana satria efa manana fahaizana momba ny fitantanana.
‹ INTELCIA: L’employabilité place au cœur de sa stratégie	› ANTOKO HVM: Ambadika politika ny fanapoahana “grenade”